के हो ई–चुरोट ? जसले मस्तिष्कका तन्तुलाई पुरै नष्ट गर्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के हो ई–चुरोट ? जसले मस्तिष्कका तन्तुलाई पुरै नष्ट गर्छ
असार १७ गते, २०७६ - १३:५५
वासिङ्टन । परम्परागत सूर्ती सेवनको विकल्पमा प्रयोग हुने गरेको ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट)ले पनि स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ई–चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्छ ।
उनले ई–चुरोटको धुँवा मस्तिष्कसम्म पुग्ने गरेकाले पनि यो निकै खतरनाक देखिएको बताए । जाहेदीले मस्तिष्क विकासका क्रममा गम्भीर मोडमा रहने भएकाले युवा र गर्भवतीले त अझ बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अध्ययन सहयोगी टाल्बोटले पनि जहाँसुकै पाइने ई–चुरोटमा निकोटिन हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।एएनआई
असार १७ गते, २०७६ - १३:५५ मा प्रकाशित